I-Torchlite: Ukuthengisa ngeDijithali ngesisombululo soQoqosho esiDibeneyo | Martech Zone
I-Torchlite: Intengiso yeDijithali ngesisombululo soQoqosho esiDibeneyo
NgoLwesine, Novemba 5, 2015 NgoLwesine, Novemba 5, 2015 Douglas Karr
Okwangoku, usenokuba ukhe wafumana esi sicatshulwa UTom Goodwin, usekela-mongameli omkhulu weqhinga kunye nezinto ezintsha e-Havas Media:
I-Uber, eyona nkampani inkulu yeeteksi emhlabeni, ayinazo izithuthi. I-Facebook, oyena mnini weendaba udumileyo emhlabeni, ayenzi mxholo. IAlibaba, oyena mthengisi uxabisekileyo, akanalo uluhlu lwempahla. Kwaye i-Airbnb, umboneleli omkhulu weendawo zokuhlala, ayinawo umhlaba.
Kukho ngoku Iinkampani ezili-17 zeebhiliyoni zeedola ekuthiwa-njalo intsebenziswano kuqoqosho. Ezi nkampani zinamava empumelelo enkulu ngokungavelisi imveliso entsha, kodwa ngokuzilungisa indlela yazo yokwenza ezenza ixabiso ngokudibanisa abantu abafuna izinto nabantu abanezinto abanokuzenza. Ukuba kuvakala kulula, kulungile, kungenxa yokuba kunjalo. Ngamanye amaxesha ubungqondi buthetha nje ukuqonda okubonakalayo.
KuSusan Marshall, umrhwebi oligqala, kuye kwacaca ukuba olu hlobo lokucinga-ukudala unxibelelwano oluhambelana ngokugqibeleleyo-ngekhe lube luncedo kushishino lokuthengisa, kuya kuba yimfuneko.
Abathengisi baye baqhela ukuthetha ukuba iteknoloji iye yalinganisa indawo yokudlala; ukuba ishishini elincinci neliphakathi ngoku linezixhobo zokukhuphisana neejuggernauts. Ukuziqhelanisa, akukho lula kangako. Nangona izixhobo zokuthengisa zedijithali zingcono kwaye zifumaneka ngokubanzi kunangaphambili, iinkampani zisafuna iingcali ezaziyo ukusebenzisa ezo zixhobo ukufumana iziphumo ezilungileyo. Sifikelele kwinqanaba apho ukuthengisa ngokubanzi kungasakwazi ukuqhubeka nesantya sokutshintsha kwedijithali. Kuthatha iingcali, kwaye kuninzi lwamashishini, ezo ngcali zinokuba nzima ukufumana.
Ukudibanisa ngcono amashishini afuna ubuchwephesha bokuthengisa kunye neengcali abazifunayo, uMarshall wadala Itotshi Isisombululo soqoqosho esisebenzisanayo esinika naliphi na ishishini amandla okwakha iqela lokuthengisa elikhethekileyo. Kwindlela yayo echasene ne-arhente, iTorchlite ibonelela ngamashishini kwindawo yentengiso efunekayo ebenza ukuba bacofe uthungelwano olukhulu lweengcali ezizezinye zokuthengisa ukucwangcisa nokwenza amaphulo edijithali.
Ingcali nganye, okanye Itotshi, Ikhethwe ngokusekwe kumashishini iimfuno ezithile. Ngaba ujonge ukuqhuba ukugcwala ngakumbi kwiwebhusayithi yakho? I-Torchlite iya kukudibanisa nengcali ye-SEO enamava kwishishini lakho ukuqinisekisa ukuba indawo yakho iphuculwe kwaye abathengi bakho banokukufumana.
I-Torchlite ibonelela ngamashishini enye indlela yokuqesha abasebenzi abongezelelweyo ngaphakathi endlwini okanye iiarhente zangaphandle. Thelekisa amaxabiso abo kwinqanaba leyure learhente okanye iindleko zokuqesha iingcali zangaphakathi endlwini ($ 50,000 kumphathi weendaba zosasazo, i-85,000 yeedola kumthengisi we-imeyile, $ 65,000 ye-SEO / ingcali yeWebhu), kwaye uyabona ukuba kunokubakho njani izibonelelo zemali.
Itotshi Ikwavumela amashishini ukuba agcine isitaki sayo sobugcisa sentengiso. Ukuba nokufikelela kuyo yonke indawo yentengiso yeengcali ezinobuchule besebenzisa phantse zonke izixhobo zokuthengisa zedijithali kuthetha ukuba amashishini akufuneki akrazule kwaye atshintshe itekhnoloji esele ikho.
Amashishini asebenzisa iTorchlite nawo anokukhetha layita, Nyusa or Cima amaqhinga athile okuthengisa kwi-Intanethi okanye iinkqubo nangaliphi na ixesha. Ukuba ukuthengisa nge-imeyile, umzekelo, kungqina ukuba yeyona nto ilungileyo ekuguqulweni kokuqhuba ngelixa amanye amaqhinga engasebenzi kakuhle, amashishini akhululekile ukuba atshintshe ukugxila kwawo kwaye abeke ngokulula izixhobo zawo. I-Torchlite ilawula yonke le nkqubo ukusukela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, oko kuthetha ukuba abanini bamashishini akufuneki bakhathazeke ngokuqesha, ukulawula okanye ukukhuphela italente eyongezelelweyo.
Ukunceda abanini bamashishini ukugcina umkhondo wento abasebenza kuyo ngeTorchliters, iTorchlite inika wonke umthengi umphathi weakhawunti ozinikeleyo kunye nokufikelela kwideshibhodi ye-Intanethi. Ngokusebenzisa ideshibhodi yeTorchlite, abathengi banokubonakala okupheleleyo kokujonga inkqubela phambili, ukujonga imisebenzi ecwangcisiweyo, ukuvuma umxholo kunye nokulandelela ukuba bakufuphi kangakanani ukufikelela kwiinjongo zabo zokuthengisa.
Unomdla wokuzama iTorchlite?
Bhalisela idemo yokukhutshwa kwangoko kweqonga leTorchlite namhlanje!
tags: IntsebenziswanoIinkonzo zentengisoItekhnoloji yentengisoizixhobo zokusebenzaitotshiitotshi